Uma uMengameli waseGibhithe uHosni Mubarak wabheka ibalazwe yezwe, uJehova wayekhomba indawo lapho manje itholakala e Sharm el-Sheikh, futhi wathi: ". Kuzoba yinto" Inkosi yayala - bantu abasebenze ngayo. Umuzi waseGibhithe, okuyinto iminyaka engu-20 kuphela ubudala, has eside futhi ngokuqinile ophethe azithele ngabandayo elilodwa zokulala ubhedu emhlabeni, futhi musa ohlose ukunika.
I charm ekhethekile ka Sharm el-Sheikh
Umholi waseGibhithe kwakungelona iphutha, ecacisa indawo esizayo kwalesi sigodi. Sharm el-Sheikh wenziwa bavikelekile imimoya enamandla Tiran Isiqhingi nasemathekwini eziningi. Ngakho-ke, ngisho ngenkathi imimoya enamandla futhi ulwandle Imisinga resort ukhululekile ngokwanele. Ngesikhathi sasehlobo, kusukela ngo-Ephreli kuya ku-September, okushisa isukela 22 kuya 38 degrees Celsius. Kusukela ngo-October kuya ku-March, ebusika, umoya eliwu +23. Umkhawulo lokushisa lamanzi - 26 degrees ehlobo nasebusika.
Sharm 4 amahhotela Indawo Verginia
indawo Picturesque Hadaba (El Hadaba), lapho ihhotela itholakala Verginia Sharm 4, ivuliwe umusho wesibili. Ibanga beach 1500 m, kodwa njengoba ngokuvamile kunjalo ezimweni ezinjalo, kuze kufike elwandle ihlelwe ukuhamba izimoto ezikhethekile okuqondene ehhotela.
amakhilomitha amahlanu kude iyona Old Town, ibanga airport Sharm el-Sheikh 19 km.
endaweni Hadaba (El Hadaba) ukhululekile nomoya isizini
Hadaba Village itholakala engxenyeni eseningizimu ye olusempumalanga zidlule iNhlonhlo YaseSinayi. Isimo sezulu ngisho ngesikhathi umoya, okungukuthi ngo-February no-March futhi, phakathi kukaNovemba noDisemba, ukhululekile ngokwanele. Bay, etholakala emhlabeni kukhona isivikelo ngokumelene imisinga enamandla abandayo ngesikhathi namagagasi.
Uma endaweni Hadaba, Umm Sid (Hadaba Um Sid) - leli kuyigama egcwele endaweni - ingeyamakhosi ekamu lezempi. Manje lapha kukhona imigqa ambalwa ehhotela, kuhlanganise Verginia Sharm Ihhotela.
Igama endaweni uhumusha njengoba 'edwaleni phezu bay, "kodwa lokho akusho ukuthi akukho ukuphila okumatasa. Izivakashi yonke indawo ayavulwa iminyango zokudla, izitolo kanye eziyisikhumbuzo ahlukahlukene. Kuma-nightclub nazo lapho, kodwa hhayi kakhulu ngendlela kwezinye izindawo edolobheni resort of Sharm el-Sheikh. Verginia Sharm, etholakala kule ndawo Hadaba, abathandi iholide okuphumuzayo.
Izindawo Sharm el-Sheikh
Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona endaweni ihlukaniswe ezindaweni eziningana, okuyizinto ezindaweni ezizungeze amatheku main olungokomfanekiso. Ixhuma kulawa masayithi emgwaqweni Ukuthula Road, okuyinto umuzi omkhulu. Lezi izindawo ungavakashela zonke izimenywa Verginia Sharm Ihhotela 3:
1. Naama Bay (elihunyushwe ngokuthi "Bay wabadala") iye landscaped kwasekuqaleni, futhi kuze kube namuhla ubhekwa indawo engcono ukuhlala Sharm el-Sheikh. Amahhotela atholakala emigqeni emithathu, main abahamba ngezinyawo emgwaqeni ngasogwini ugcwele zokudlela kanye izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo, kwenza izivakashi.
2. saziso ukuvakashelwa iphuzu izivakashi ehhotela Verginia Sharm 3 esifundeni ningizimu-ntshonalanga ngaphansi kwegama Sharm El yamaMaya, okungenani ngenxa yokuthi kukhona kuphela beach sandy e Sharm el-Sheikh futhi Old Market Market. Ukuhamba phezu kolwandle, izivakashi iya ikakhulukazi lapha.
3. Hadaba (El Hadaba) - endaweni phakathi izindawo Naama bay Charm futhi El Maya.
4. Bay Sharks Bay idume coral zamakhorali yayo enhle.
5. Nabq, etholakala enyakatho-mpumalanga ye endaweni Naama Bay.
6. Ras Umm El Sid. Famous for ukubukwa ulwandle yayo nehhotela aphambili Ritz Carlton.
I izici eziyinhloko yehhotela
Ihhotela Verginia Sharm ngokuvamile libhekwa njengoba inkanyezi ezintathu, kodwa, ngokuvumelana Imininingwane posted on the website esemthethweni isikhungo, kuba esigabeni 'izinkanyezi ezine ". Ihhotela lakhiwa ngo-2005. Ibanga kusukela Old Market 5 km kusuka Naama endaweni Bay - 7 km.
izindleko zansuku zonke sokuqasha amakamelo uhla ehhotela ruble 900 kuya ku-3000.
Ngokwe isilinganiso kanye isilinganiso intengo-izinga esifundeni Sharm el-Sheikh, ihhotela oluthatha indawo yesithathu esifundeni. Siqukethe isakhiwo ezimbili storey nge block eyengeziwe.
Budebuduze Verginia Sharm 4 has lolwandle ayo isihlabathi futhi phansi itshana. It engafinyelelwa nge khulula njalo Shuttle.
Long lolwandle a ikhilomitha ifakwe emphemeni izihlalo, izambulela kanye omatilasi, angasetshenziswa mahhala. Kukhona pontoon amamitha 60 isikhathi eside dive yakhe uma babefisa - ukujula eyanele le njongo. Seduze enhle kakhulu coral zamakhorali nabameleli emangalisayo nezilwane. Ngenxa yezizathu zokuphepha, yonke efanayo kungcono ingamthinti, futhi ukungena olwandle isichathule ekhethekile.
Umbuzo ngamandla ngesikhathi Verginia Sharm 3 ukuxazululwa esivuna baseRussia wayemthanda uhlelo "zonke okufakayo» (zonke okufakayo). Iziphuzo kwanoma iyiphi isigaba ukukhiqizwa lendawo bakhululekile. Leli hholo liyabukeka cooler ngamanzi ahlanzekile.
Esikhathini Verginia Sharm Ihhotela 3 ubuswa amakamelo ejwayelekile, Nokho, yonke 156 etholakalayo futhi kungenziwa libhekene omubi. Bonke amahle, elikhanyayo futhi zikhululekile. Ngaphezu kwalokho, kukhona amakamelo esikhethekile non-ababhemayo. Ubuningi ezindlini ezine zitholakala, kodwa isicelo ungakwazi ukucela enye embhedeni - ngenkokhelo nesizotha izisebenzi ngeke sisamukele isicelo sakho.
Ngo iliphi igumbi Verginia Sharm Ihhotela iGibhithe wazizwa kusukela ephasishi. On the amacansi phansi iyamangalisa elinezwe-ezinezihloko eqinile, kodwa kuthiwani izibalo eyinkimbinkimbi yokusebenza amathawula ukuthi uqiniseka ukuthi avele embhedeni wakho! Abasebenzi akuyona libhekene lifuna isimo futhi ahlanze amakamelo ngokwezinjongo ezinhle.
I Suites unawo wonke Izinsiza ejwayelekile, yokuthopha Depository ephephile. izibuya tiled. Igumbi ngalinye has a TV nge-satellite yezokusakaza, isiteshi umuntu okhuluma isiRashiya. Yiqiniso, kukhona ucingo kanye air conditioning, elisebenza isimiso sezinzwa esiyinhloko. Umbhede nelineni washintsha katsatfu ngeliviki.
Kukhona kungenzeka Embhedeni owenezelwe, izindleko kwezinsizakalo $ 15 ngelanga.
Njengoba lizungezwe izwe izimbali kanye zasemazweni. Impahla ihlanganisa Amabha amathathu futhi omunye yokudlela. Ibha sokuqala e isitayela Oriental, kanye wesibili eliqoshiwe njengenhlangano pub ngesiNgisi. Enye ibha itholakala phakathi echibini. Amandla wonke uhlelo okufakayo THEMBISA izivakashi kanye ukudla ipharadesi iholide esiswini, ngakho kuze kube mayelana indlela yokudla ehambisana nempilo kufanele ukhohlwe. Le restaurant ivuliwe kuze 22:00, futhi inikeza ezihlukahlukene inyama, inhlanzi, nemifino izitsha. Ice cream, izithelo ezithile zonyaka, amaswidi Arabhu namakhekhe uqiniseka ukujabulisa bonke abalandeli ukujabulela. Umthamo Amabha aphuze isikhukhula esivamile ayatholakala usuku lonke mahhala.
Izivakashi zehhotela nethuba ukusizakala yehhotela ilondolo noma yokugunda ngemali ethile. Uma konke kusenjalo khona yayidingeka ngempela, unikezwa ukusizwa ngodokotela abaqeqeshiwe ukukhonza amaklayenti ethu, ngokuba njalo kusayithi. Uma kudingekile ukuhamba edolobheni noma uhambo, ungabiza ikamelo itekisi (ukuvula nsuku zonke).
On-site izitolo isipho avulekele wonke indawo nge ezimnandi izikhumbuzo isipho iholidi emangalisayo. Ngokwezwi nezwi igama elithi konke ungathenga kulezi izitolo. By endleleni, uma ungenawo behlise nomnikazi, yena wathukuthela kakhulu.
Njengoba for kusayithi, incane. Nokho, it is kakhulu sizikhandle etholakala eduze kwechibi. I negative kuphela ukuthi akukhona ukufuthelana amanzi. Ngaphezu kwalokho, kumelwe sikhumbule emaphethelweni ezishelelayo ezizungeze, ikakhulukazi labo ababonwa iholidi baye nezingane. Ihhotela inikeza ubusuku nemini ATM nokusebenza ngendlela efanele, futhi uma udinga ukufinyelela kwenethiwekhi wembulunga yonke, cafe internet, ekhokhwa ngokwehlukana. Ensimini ka emhlabeni etholakalayo-Wi-Fi (kwendibilishi).
Usuku lonke Animators ukubungaza izivakashi nohlelo lwawo ejwayelekile, okuhlanganisa imidlalo asebenzayo, besina bethi: imincintiswano ehlukahlukene, aqua futhi stepaerobika, polo yamanzi. Ungase futhi ukudlala izikhali table tennis, kodwa cishe kungaba efanele ngesikhathi lapho ukushisa luyaphela kuphela.
Beautiful coral zamakhorali eduze lolwandle yitshe eliyigugu of Verginia Sharm ehhotela. Izimpendulo ngaye lingama ngomdlandla. Kahle waphawula kanye nezinsizakalo ze-sikhungo diving, evulekile bonke abathandi emhlabeni ngaphansi kwamanzi. isixwayiso okubalulekile izicathulo - ngaphandle kolwandle kungcono hhayi ukungena.
Uma ufuna ngempela ukuba isebenze kanzima futhi abe toned kakhulu futhi ukwenzela ukungena okuncane kakhulu - ejimini - amasevisi abo bonke abalandeli ezemidlalo enempilo.
Spa zokwelapha kanye Nights Oriental
It ayisekho imfihlo ukuthi ngaphambi kwesikhathi sokuqala siye ebhishi, uhlanze ebusweni isikhumba kusukela ungqimba ezingadingekile esakha nakanjani ngamunye wethu. Izivakashi Ihhotela Verginia Sharm Ihhotela bamenyiwe ukuvakashela ezihlukahlukene spa zokwelapha, ukubhucungwa ezihlukahlukene futhi, yebo, sauna.
Arab kusihlwa show idume imibala yayo elikhanyayo futhi othakazelisayo umdanso asempumalanga. Ngezinsuku zemikhosi ethile ungakwazi khona isigaba inkosi ukufunda isisu umdanso.
Zonke guys ehhotela ngokuqinisekile zikhona ezokuzilibazisa wonke umuntu. Izingane zinabantu indawo frolic futhi ugijime - ensimini kukhona ebaleni lokudlala egqamile futhi ezithakazelisayo oluxube umdlalo. Ngaphezu kwalokho, izingane zakho zingaba sihlolisise namasevisi ngophethe abakhathalelayo ahlinzekwa bese ekukhokhela.
Ensimini ka Verginia Sharm Ihhotela itholakala pool izingane 4 sika. Imininingwane abazali ayiveli indawo ukuthi alinaso bafudumale. Kodwa Animators friendly uyohlale ukuthola indlela jabulisa wena bese bakutshele konke abanesithakazelo kule ehhotela, emzini Sharm el-Sheikh kanye nezwe ngokwalo. Izingane bayoba nesithakazelo futhi kuzothatha nje abazali adle endaweni yokudlela, ujabulele ukuyothenga noma ukubhukuda olwandle.
Ungakwazi ukuza leli hhotela nengane, uma wayesefulathele izinyanga eziyisishiyagalombili. Baby uhlaka ku egumbini atholakale ngesihle eyicela. Esikhathini yokudlela kukhona izihlalo ekhethekile lapho ungakwazi uhlale imvuthu.
Ngokuvamile, usizo olutholakalayo bonke abavakashi ku Verginia Sharm Ihhotela, lingachazwa ngokuthi standard. Kodwa kukhona yini ongakhetha kuzo enikezwa Uhlelo ocebile uhambo. Kule ndaba, indawo ehhotela kunenzuzo kakhulu. Ngakho, uma kuqhathaniswa eduze Israyeli, ngokukhethekile, baliyisa enhloko-dolobha - eJerusalema. Kodwa kufanele uqale ngakolunye izindawo zokukhulekela.
Labo kuzivakashi bengajwayele ahlale endaweni eyodwa, Verginia Sharm Ihhotela unikeza uhambo Wezindela i-St Catherine ongaphansi kweNtaba iSinayi. Kuhlukanisa kusukela ehhotela 190 km.
It lamiswao ku VI ekhulwini BC ngomyalo we uMbusi waseByzantium uJustinian, ngemva kokubekwa kwesisekelo wathola igama esigodlweni sezindela isimo kanye Isigodlo NESIHLAHLA ESIRUTHE (lokhu ungcwele futhi insimu yalo).
Umlando kokwakhiwa Isigodlo kuyinto. Izindela-Hermits, efuna ezinkangala amandla omunye abangcwele lokuqala - Catherine laseGibithe, bathole Mount uMose, ngokuphindaphindiwe wabuza umbusi sokwakha ithempeli kule sayithi. Umsizi uJustinian, ethola iziyalezo mayelana isakhiwo, wanquma sokuzakhela sezindela thick-ngodonga hhayi esiqongweni sentaba phansi esigodini, lapho kwakulula khona kuphephile kakhulu ukubonakalisa ekuhlaseleni izitha. Umlando abonisa ukuthi umsizi wabulawa. Nokho, phakathi nokuba khona kwamakamu Isigodlo yena axhasa omkhulu kulelo zwe. Ngezikhathi zempi lokulwa phakathi kwamazwe, leli qiniso kuyisivikelo onokwethenjelwa sezindela.
Ekhulwini XI Isigodlo saqanjwa Isigodlo St Catherine yokudumisa Martyr Omkhulu, owaphila kusukela eminyakeni 287 305. BC Ngokusho yetinsita eseneminyaka emangalisayo enhle, ehlakaniphile, osemusha waqala ukukholelwa kuKristu, ukuguqukela ebuKristwini kwabaningi emhlabeni, okuyiwona ngisho wathola ukungajabuli uyise. UMbusi Maximin ababulawa uCatherine.
Ngokusho yetinsita umzimba wakhe kwashukumisela izingelosi ukuba phezulu laseSinayi. Izindela wathola izinsalela, ukukhomba kubo esiyingini, esanikwa isikhulu uCatherine iisus hristos. Kusukela ngaleso sikhathi, izinsalela ongcwele aphumule esontweni sezindela futhi kuyatholakala nsuku zonke.
Ngo-2002, Isigodlo kwahlanganiswa UNESCO uhlu eziyiNgcebo Yomhlaba izindawo.
Tours kwa-Israyeli, eJerusalema
Abaningi ufisa ukuya ezindaweni ezingcwele emhlabeni. Verginia Sharm Ihhotela 4 inikeza izihambi ngosuku olulodwa-futhi multi-day hambo ezindaweni ukuthi wonke umuntu, kungakhathaliseki ukuthi ukholo lwabo, kufanele uvakashele okungenani ngenjongo ukhulisa ezingeni yentuthuko emasiko abo.
Of izincomo esikhethekile abahambi kungenziwa isitayela sokugqoka kuqashelwe, njengengxenye ukuvakasha usohlelweni kuhlanganisa Ukuvakashela izindawo ezingcwele, ngokulandelana, emahlombe namadolo zamadoda nabesifazane kumele ivalwe, ofaka umnqwazo abobulili fair Kuphoqelekile. Udinga ukugqoka izicathulo ukhululekile, okuyinto ematheni akufanele kube ezishelelayo (ibhuloho eJerusalema is kwavula nge cobblestones bushelelezi lasendulo).
Benesidingo ukuthatha iphasiphothi yakho, amanzi nokudliwayo endleleni. Imibhalo ukuthola i-visa kuze kube semngceleni, u-Israyeli wakhonzela izinsuku ezintathu ngaphambi kokuba ahambe aye, kanye kakhulu umngcele ndima incike amasiko izikhulu, ngakho kungase kube khona ukubambezeleka kwamandla umhlahlandlela.
Uma sicabanga ngohambo usuku ke inqubo yayo kanje. Ngemva edabula Israeli umngcele umzila amanga endleleni uze uyofika oLwandle Olufile, lapho kuzothatha isikhathi amahora amathathu, eminye kukhona stop eJerusalema imizuzu eyishumi nanhlanu ukuhlola Idolobha elidala ukuphakama Pancake Intaba. Khona-ke uhlela Ukuvakashela eBhetlehema, okungukuthi - ethempelini kukaJesu. Izivakashi uzophinde ukumenywa ukuvakashela emkhombeni kaJesu futhi emhumeni kukaJesu.
Zonke izinkambo zihlanganisa ukudlula indlela elusizi yayenza umuntu likaJesu eKalvari. Qiniseka ukujabulela ukufinyelela emhumeni okwakukhona kuwo umzimba koMsindisi liphambi kokuvuswa kwakhe. Ekugcineni, ngemva kokuvakashela eWestern Wall ukuba indlela emuva.
Kungakhathaliseki ishiwo Ihhotela Verginia Sharm, ukubuyekezwa uyavumelana entweni eyodwa - ngokuqinisekile isikhungo udlala abaqhoshayo aphambili nozakwabo. Nokho, zonke izimo ukuhlala ukhululekile lapha enikeziwe. abasebenzi nomusa, ukuhlanza ezingeni eliphezulu. izihambi eziningi ukuze inkampani woza, ezidinga igumbi angomakhelwane, futhi kunoma iyiphi lokuhoxisa besingenayo ndawana isiphi isimangalo yemali yizisebenzi edilini lomshado. insimu yonke ehhotela lizungezwe izimbali kanye zasemazweni. amakamelo Indawo Kuyaphawuleka ukuthi omakhelwane ungagxambukeli nomunye. Kusukela kolwandle imizuzu emihlanu ukuya khona, futhi izivakashi usho njalo endawo izindiza of the Shuttle ebhishi. Futhi ubuhle uLwandle Olubomvu izakhamuzi zakhona, ngubani sesinomkhuba izivakashi kanye ningabonisi isithunzi ngenxa yokwesaba, akekho oye ochithiwe.
On the ingxenye abanye amaklayenti wakhononda. Basitshela ukuthi elikhokhelwa-Wi-Fi kanye ezinye izisebenzi. Othile akhononda yokuntuleka ngokuchichima lezitsha, kodwa akusiwona ehhotela five star! Ungathenga i-SIM khadi ukuze bavule i-Internet futhi kungancika ekutholakaleni-Wi-Fi, futhi mayelana nabasebenzi - the Izinto ezenziwa abantu kubonakaliswe hhayi kuphela e-Egypt.
Efingqa bonke ngenhla, ukuphetha ngokuthi ukuthi ihhotela uhlelekile futhi enikeziwe izimo esihle ukuzilibazisa ngokuphelele eyamukelekayo ngemindeni nezingane futhi kulabo ungathandi umsindo futhi eziningi zabantu emhlabeni. Lokhu kwaba nentando Verginia Sharm Izibuyekezo 4 ehhotela lapho phakathi ulwazi ngaye njengoba ukusungulwa isabelomali ngodondolo friendly, lolwandle amahle kolwandle enhle. Qaphela izindlela zokuphepha, ungaphuzi futhi ningakudli, umsuka okuyinto engaziwa kuwe, ungakhohlwa imithi ekhaya, okhilimu yafakwa ukusuka elangeni futhi ujabulele kolwandle futhi ukugeleza unhurried zokuphila!
Danilovo Lake (Omsk esifundeni): ukuphumula, Legends
Okan Yalabık: Biography of the ethandwa umlingisi Turkish
Yezandla Bright kusuka amapensela ngezandla zakhe: nesithombe workshop